Isishicileli soDonga, Isishicileli soMgangatho, Isishicileli se-Inkjet esiphathwa ngesandla - huakehengrun
Ifowuni:+86 189 7131 9622
Isishicileli se-Inkjet sePasi enye
desktop inkjet umshicileli
cij inkjet umshicileli
Umatshini wokupeyinta we-HKHR Wall UV
Isantya esiphezulu esithe ngqo sodonga lomshicileli we-inkjet
CMYK inkjet umshicileli eludongeni yoshicilelo eludongeni mac...
Umshicileli wodonga lwangaphandle Umshicileli weRobhothi wodonga...
Umatshini woShicilelo we-UV we-3D we-UV we-inkjet oNgqo ngqo kwi-w...
Umatshini wokuprinta wodonga oluzenzekelayo lwe-3D oluthe nkqo...
Isantya esiphezulu CMYK ikepusi yePlastiki kwi-Intanethi yeShishini C...
Umatshini woMshicileli othe nkqo wodonga lwaseludongeni lwe-3D yoPeni eludongeni
Isantya esiphezulu se-CMYK Mask Logo Umbala we-UV umshicileli we-inkjet
Umatshini wokuKhowuda ngeKhowudi ye-Thermal Inkjet ye-Inkjet ngesandla
Mini Portable date coder inkjet umshicileli ophathwa ngesandla
I-TIJ yokubhala iPeni ephathwayo yesishicileli se-Inkjet seMac...
75mm ikhowudi yomhla yomshicileli we-Thermal Handheld inkjet ...
Umatshini woShicilelo oPhakamileyo we-3D we-UV we-UV
ISigqibo esiPhezulu se-Ink Jet ye-UV yesishicileli soMgangatho woMgangatho...
I-Wuhan HAE Technology Co., Ltd. ukususela ngonyaka ka-2008, iinkokeli zehlabathi kwi-Inkjet Printing, ukushicilela eludongeni kunye nokushicilela umgangatho.Olu ludonga lokuqala lwehlabathi kunye nomshicileli wodonga ovelisa izinto ezintsha enokusetyenziselwa ukuprinta nantoni na nakuwuphi umphezulu osicaba kumgangatho ophezulu kangangokuba amehlo akho angayikholelwa.
Ivili lohlobo lomshicileli wodonga lwe-huakehengrun lilula kwaye liyasongeka kwi-tranporatioin, ukusebenza okulula, okuzinzileyo kunye noshicilelo oluphezulu lwe-2880dpi.
Kukho umshicileli wodonga lwe-inki ye-CMYK esekwe ngamanzi kunye ne-CMYK+W UV umatshini wokushicilela wodonga lwe-inki ukuze ukhethe ukuhlangabezana nesicelo sesicelo soshicilelo sabathengi abahlukeneyo.
yiba ngumhlobo wethu
Eyona inki incinci ye-UV emhlabeni izenzekela nkqo ...
Sinamava oyilo atyebileyo, ukusetyenzwa kwezixhobo ezilungileyo kunye nomthamo wokuvelisa.
Ukusebenzisa inkqubo yangoku yasekhaya ekrelekrele yokulawula imodyuli, edityaniswe nezixhobo zomatshini eziphucukileyo ukwenza iinxalenye, ukwenza ukuhanjiswa kwezixhobo kuchaneke ngakumbi, intshukumo ezinzile, kunye nobomi benkonzo obude.
Ngoku, izikolo, iihotele, iivenkile ezinkulu, iihotele, iinkulisa, iisaluni zobuhle, iindawo zokuzilolonga, kunye neendonga ezingaphandle zezinye izakhiwo zonke zifuna ukupeyintwa eludongeni ukuze zihombise.
Ukucinga malunga nokuba abathengi bacinga ntoni kunye nento abayifunayo, yonke into kwimbono yomthengi, ukusuka kuphando ukuya ekuphunyezweni, ukuhlangabezana nokuziphatha komntu ngamnye, ukuphucula umgangatho wemveliso, kunye nokunciphisa iindleko zemveliso.
Iqela le-R&D elifunde kakhulu lenkampani liqinisekisa ukusungulwa kwezinto ezintsha eziqhubekayo kunye nokusebenza okuzinzileyo kweemveliso zenkampani, okwenza iimveliso zenkampani zigqame kukhuphiswano lwemarike.
Inkampani igxininisa ekubeni igxile kubathengi kwaye ijolise kwimarike, ukuze inkampani ikwazi ukugcina ukukhula okusebenzayo kwexesha elide.
Ukuhlelwa kwemigaqo yeeprinta ze-inkjet
1. Iprinta ye-inkjet eqhubekayo Ngaphantsi koxinzelelo lwempompo yokubonelela nge-inki, i-inki idlula kwipayipi ye-inki ukusuka kwi-tank ye-inki, ilungelelanise uxinzelelo, i-viscosity, kwaye ingena kwi-spray gun.Njenge...
Inkjet yoshicilelo lwentloko yokugcinwa kunye nokugcinwa
Njengenxalenye engundoqo yomshicileli we-inkjet, intloko yoshicilelo ibaluleke kakhulu.Intloko yokushicilela ibaluleke kakhulu, kwaye kuya kuba buhlungu kakhulu ukusebenzisa ixesha elide.Ukuze t...
Idilesi yeFactory yeNkampani yaseBeijing: 101A, iSakhiwo se-11, iCourtyard 3, iGaolizhang Road, iSithili saseHaidian, eBeijing
Iintengiso zaphesheya kunye neOfisi yoThengiso yaseTshayina:
I-Wuhan HAE Technology Co., Ltd.
Umgangatho we-6, isakhiwo se-2A, i-Optics Valley Science and Technology Port, i-Guanshan Road, i-Optics Valley, i-Wuhan, i-China
ifowuni esisigxina:+86 27 8750 8600
Umshicileli we-inkjet ophathwa ngesandla
Umshicileli we-Inkjet we-Intanethi